CEEB: Ozil, Aubameyang, Lacazette, Kolasinac Iyo Guendouzi Oo Khamri & Gaas Lagu Mirqaamo Kaga Dhergay Baar Lagu Caweeyo – Kuma Ayuu Ahaa Ciyaartoyga Diiday Inuu Maandooriyahan Isticmaalo? – Cadalool.com
CEEB: Ozil, Aubameyang, Lacazette, Kolasinac Iyo Guendouzi Oo Khamri & Gaas Lagu Mirqaamo Kaga Dhergay Baar Lagu Caweeyo – Kuma Ayuu Ahaa Ciyaartoyga Diiday Inuu Maandooriyahan Isticmaalo?
Qaar ka mid ah ciyaartoyga Arsenal ayaa sameeyey dhacdo fool xun kaddib markii ay tageen baar ku yaalla magaalada London oo lagu cabbo khamriga iyo gaas lagu mirqaamo.
Muuqaal lasoo bandhigay ayaa waxa uu muujiyey in xiddigaha Arsenal ee Mesut Ozil oo dhaawac kaga maqnaa kulamadii u dambeeyey ee Arsenal, Aubameyang oo ah laacibka ugu goolasha badan Gunners, Alexandre Lacazette, Saed Kolasinac iyo Matteo Guendouzi ay khamri badan ku cabbeen mid ka mid ah baararka lagu caweeyo ee magaalada London, halkaas oo illaa xili dambe ay ku gaadheen.
Warkan oo uu bannaanka keenay wargeyska The Sun ee kasoo baxa UK, ayaa waxa muuqaallada laga arkayaa Ozil oo cabbaya khamri iyadoo ay la wadaagayaan Aubameyang, Lacazette, Kolasinac iyo Guendouzi, kuwaas oo markii dambena uga wareegay cabbista gaasta la nuugo ee loo yaqaano Nitrous Oxide, taas oo lagu mirqaamo.
Muuqaallada ceebta ah waxa ka mid ah in laacibka xagaagii kusoo biiray Arsenal ee Guendouzi uu isbeddelay markii uu jiiday tuunbada lagu nuugo gaasta lagu mirqaamo.
Henrikh Mkhitaryan oo isaguna madasha joogay ayaan ka qayb qaadanin gaasta iyo khamriga ay cabbayeen asxaabtiisu.
Falkan ayaa dhacay bishii October oo ku beegnayd maalintii ay Manchester City 2-0 ku garaacday Arsenal, waxaana loo turjuman karaa in niyad jabkii ay ka qaadaan natiijada ciyaartu ay ula gashay inay falkan foosha xun ku kacaan.
Afhayeen u hadlay Arsenal ayaa waxa uu sheegay in aanay ciyaaryahannada kala hadli doonin falkan sameeyeen, sababtuna ay tahay inay ogyihiin masuuliyadda saaran iyo inay metelaan kooxda.
Arrintan oo hadal-hayn badan keentay ayaa waxa la sheegay in cabbista gaastan lagu mirqaamo aanay mamnuuc ka ahayn waddanka Ingiriiska.
Sidee lagu helay muuqaalka
Muuqaalka ayaa waxa duubay kamaraha CCTV ee ku dhex yaalla hotelkan lagu caweeyo, waxaana dibedda keenay wargeyska The Sun oo inta badan siraha ciyaartoyga, dadka caanka ah iyo fadeexadaha soo bandhiga.